Akụkọ - New Samsung Tab S7 FE na Tab A7 lite na-abịa.
Site na akụkọ a na-akọ, ihe ọhụrụ Samsung galaxy taabụ S7 FE na Galaxy tab A7 Lite na-abịa na June 2021.
Galaxy Tab S7 FE bụ maka inye ndị ahịa atụmatụ ha hụrụ n'anya na ọnụahịa ọnụ.
Ejiri 12.4-inch buru ibu rụọ ya ngosi, zuru oke maka ịme ntụrụndụ, arụpụta ihe, ọtụtụ ọrụ, na ihe okike na ọkwa ọzọ.
Ejiri S Pen dị n'ime igbe, yabụ ị nwere ike ịme ọtụtụ ngosipụta ahụ na ike site na ọrụ gị na arụmọrụ ka ukwuu.
Na Samsung Notes, ị nwere ike mfe tọghata gị na ihuenyo handwritten ndetu ka ederede. Dowe ndetu gị site na iji akpaka na akpaghị aka wee jiri ọgụgụ isi chọọ ihe edeturu nke ịchọrọ n'otu ntabi anya - n'agbanyeghị na edere ma ọ bụ aka dee.
Na mgbakwunye, iji bulie arụmọrụ ha, Galaxy Tab S7 FE kpuchie na Samsung DeX na mkpuchi keyboard, ịnwere ike iji mbadamba ụrọ gị dị ka laptọọpụ. Ọ na-enweta ihe dịka PC na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na akwụkwọ nyocha ma ọ bụ ọrụ ọrụ ị mepee ọtụtụ taabụ ma ọ bụ ngwa ngwa n'otu oge, ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị: Galaxy Tab S7 FE na-edozi ọtụtụ ọrụ na ịdị mfe.
Galaxy Tab S7 FE bịara na ọmarịcha agba anọ: Mystic Black, Silver Mystic, Mystic Green na Mystic Pink.
Ọbụna na nnukwu ngosi, ọ na-etu ọnụ profaịlụ na ọkụ.
Site na batrị dị ike na 45w na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, ịnwere ike ịfegharị, rụọ ọrụ, ma mepụta na-enweghị nrụgide ịchọta ụzọ dị nso.
The Galaxy Tab A7 Lite bụ ebu-tinyere enyi na ego ọnụ. Site na ihuenyo 8.7-inch na-etinye na mpempe akwụkwọ na-acha ọkụ, na-adịgide adịgide, ọ bụ nnukwu-obere. Ebughibu bezels gburugburu ngosipụta na ike Dual Speakers na Dolby Atmos na-ewetara gị nso na akụkọ mgbe ị na-ele ihe nkiri kachasị amasị gị, ihe ngosi, na igwu egwuregwu.
Galaxy Tab A7 Lite na-akwado ngwa ngwa ngwa ngwa 15W, ya na batrị na-adịte aka na ike LTE nwere ike ọ dị mma.
Agba abụọ bụ avaiable, ọlaọcha na isi awọ.
Kedu tab bụ enyi gị zuru oke?